Isikhokelo seMi Dog
I-Encyclopedia yabanini beNja
Ukugcinwa kunye nokhathalelo
Unokwazi njani ukuba inja ikhutshiwe?
Udidi: Ukugcinwa kunye nokhathalelo 0
Ukungabikho kwamasende: Eyona ndlela ilula yokwazi inja efakwe i-neutered kukungabikho kwamasende. Ukongeza kokungabinawo amasende abonakalayo kwisingxobo sakhe, wena...
Yeyiphi inja ephumelele inja yokuhlangula yophawu?
IBig Rig ithweswe isithsaba sokuphumelela kweyona iNgqwesileyo kwimibimbi. Ngubani ophumelele ukuhlangulwa kweNja ngo-2020? Eyona nto iphumeleleyo kwiBelly Rubs, iswekile ithweswe isithsaba seNgcono kwiRescue. Ndingenza njani…
Ingaba inkulu kangakanani i-mini bull terrier?
Njengazo zonke iintlobo zenkunzi yenkomo, iMiniature Bull Terrier ipakisha ubunzima obuninzi bemisipha kwisakhelo sayo. Ubude buqala kwi-10 ukuya kwi-intshi ezili-14 kunye nobunzima ukusuka…
Umbuzo wakho: Ngaba izinja ezindlongondlongo zihlala zindlongondlongo?
Ngaba inja endlongondlongo inokuqeqeshwa ukuba ingabi ndlongondlongo? Ngaba ukuqeqesha inja endlongondlongo kunokwenzeka? Ewe. Ubundlobongela ezinjeni, nokuba kumnini wenja okanye...
Zeziphi ezona klasi zibalaseleyo zoqeqesho lwenja kwi-intanethi?
Ngaba izifundo zoqeqesho lwenja kwi-Intanethi ziyasebenza? Ngaphandle kweemeko ezimbalwa ezinqabileyo, uqeqesho lwenyani lusebenza kakuhle, kwaye ngamanye amaxesha lungcono kuneeseshoni zoqeqesho lomntu. Ndingaziqeqesha njani...
Ndingenza njani ukuze inja yam eqhwalelayo ihle kwizinyuko?
Ndingayenza njani inja yam endala ukuba yehle ngezitepsi? Ngokusekwe kuloo mava, ndincoma ukuba uzame izitepsi ezichasene ne-anti-slip okanye i-carpeted no-slip tread. Wena...
Ngaba kufuneka ndifumane inja xa ndithatha umhlala-phantsi?
Kutheni kufuneka ufumane inja xa uthatha umhlala-phantsi? Izinja Zikhuthaza Uluvo Lwezinja Zoluntu aziboneleli nje ngobudlelwane obuninzi kunye nothando ngokwazo, ziya...
Uliqaba njani ikhala enjeni?
Ngaba ndingagalela ikhala kwisikhumba esirhawuzelelwa yinja yam? A: Ewe, ungasebenzisa ijeli yekhala kwizinja ezinolusu olurhawuzelelwa ukuphelisa ukutshisa kunye nokucaphuka….
Umbuzo wakho: Kwenzeka ntoni ukuba awuyi kupha inja yakho yemazi?
Izinja ezizimazi zinokufumana iimeko ezininzi ezibeka ubomi esichengeni ukuba azihlatywanga. Banokufumana usulelo lwesibeleko, olubizwa ngokuba yi-pyometra, olufuna utyando olungxamisekileyo. Ukuba oku…
Yintoni ebangela ukudumba kweentsini ezinjeni?
I-Gingival hyperplasia ibhekiselele kwi-conditon yezonyango apho intlaka yenja (gingival) ithishu idumba kwaye yande. Ukwandiswa ngokwesiqhelo kubangelwa kukucaphuka ngenxa yeplaque yamazinyo…
1 2 ... 3,011 Okulandelayo
Molo, igama lam ndinguPeter. Kwibhlog yam uyakufumana lonke ulwazi olubalulekileyo malunga nezinja -ukukhulisa, ukukhulisa, ukhathalelo, iimbumbulu, iinyani ezinomdla, njl.
Ngaba izinja ziyabathiya oogqirha bezilwanyana?
Kutheni inja yam ihlala ikhotha?
Ngaba iipads zokukhotha zilungile ezinjeni?
Zeziphi ezona zinja zeembaleki?
Umbuzo oqhelekileyo: Kuthetha ukuthini xa inja inolwelo esiswini sayo?
Ngaba inja yam iya kubekwa phantsi xa iluma umntu?
Ngaba amathumba eeseli zemast ezinjeni ayopha?
© 2022 Isikhokelo seNja
UKUQWALASELWA KWABASEBENZI ABALUNGILEYO! Zonke izinto ezithunyelwe kule ndawo zenzelwe ulwazi kunye nemfundo! Ukuba uyakholelwa ukuba ukuthunyelwa kwayo nayiphi na into kunyhasha ilungelo lakho lokushicilela, qiniseka ukuba unxibelelana nathi kwifom yoqhakamshelwano kwaye nezinto zakho ziya kususwa!